Iibhothi ezimfutshane ezineMicro Suede ephezulu kunye neFaux Fur Lining House style (Abafazi / Amantombazana) -Goodao Technology Co, Ltd.
Iibhothi ezimfutshane ezineMicro Suede ephezulu kunye nesitayile seFaux Fur Lining House (Abafazi / Amantombazana)
Umzekelo NO.: BLM2168
Ngababini ama-US $ 6.88-7.38 / ngababini
Umbala: Mnyama / Tan
Abafazi bayakuthanda ukudibanisa nezi mpahla zimfutshane zineekhola ezinde zeenwele! Iinsoles ze-foam zeSupersoft ziyabagcina bonwabile, ngelixa izinto ezingaphandle zangaphakathi / zangaphandle zibonelela ngenkxaso efunekayo ngexesha lokudlala.
Ezi bhutsi ngumxube ogqibeleleyo wentuthuzelo kunye nokusebenza. Umbane wangaphakathi uya kuzigcina iinyawo zakho zishushu kwaye inkumbulo foam foam iya kukugcina ukhululekile imini yonke. Uyilo lwabo olwahluka-hlukeneyo luhamba kakuhle kunye neebhulukhwe zakho ozithandayo zokuphumla ngelixa uphumle ekhaya okanye ibhulukhwe engaqhelekanga yokujonga iofisi.
Egqithileyo Abafazi abaThambileyo beFaux Fur Thong Slipper
Okulandelayo: Iibhokhwe eziphakathi kwamathole kunye neMicro Suede ephezulu kunye neFaux Fur Lining (Abafazi / Amantombazana)
Izihlangu zeFluffy Boot
Fluffy Boot Slippers Abafazi
Ngaphakathi Boot Slippers
Abafazi beFluffy Boot Slippers